Deramweaver မှာ background pictiure တင်နည်းသိချင်ပါတယ် — MYSTERY ZILLION
မူလ › Web Development › Dreamweaver
Deramweaver မှာ background pictiure တင်နည်းသိချင်ပါတယ်
May 2007 edited April 2009 in Dreamweaver
Deramweaver မှာ background picture တင်တာ picture ကိုအကုန်မမြင်ရဖူးဖြစ်နေပါတယ်။ background တခုလုံးမှာ picture ရဲ. အပိုင်းလေးတပိုင်းပဲ ပေါ ်ပါတယ်။
ဆရာကိုမေးတော့ picture size ကို photoshop or paint မှာသေးပြီးမှ တင်ရမယ် လို့ပြောပါတယ်။ အဲလိုလုပ်တော့လဲမရပါဘူး။ ဘယ်လိုတင်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
picture file type နဲ့ကောဆိုင်ပါသလား။ ဂျူးဂျူး test တာတော့ jpeg, gif, bmp အစုံပါပဲ။ မရပါဘူးရှင်။
Background Picture တင်တာကတော့
1. Modify Menu ကိုဖွင့်ပါ။ Page Properties ကို ၀င်ပါ။ ဒါမှမဟုတ် Ctrl + J ကိုနှိပ်ပါ။
2. Background Image ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကိုလိုတဲ့ဖိုင်ကိုရွေးလိုက်ရုံပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကိုယ်တင်မဲ့ Background Picture ရဲ့ ဆိုက်ကိုတော့ ချိန်ဖို့လိုပါမယ်။
June 2007 edited June 2007 Administrators
barani wrote: »
တခြားနည်းကတော့ CSS နဲ့တင်လို့ရပါတယ်.. CSS ပိုင်းကို CSS Topic မှာရေးထားပါတယ်..
ရိုးရိုးပဲဆိုရင်တော့ file size ရှိသလောက်ပဲပေါ်မှာပါ.. CSS နဲ့တွဲရင် repeat-x , repeat-y တို့ အပြင် fix ပါလုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ်... file type နဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး... background လုပ်ရင် fix လုပ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့.. ဒါမှ မဟုတ် background color ထည့်... ပုံထည့် ပြီးမှ fix လုပ်အဲလို မျိုးလေးလဲ ကောင်းပါတယ်..
background: #CBE6F9 url(images/forumheaven/main/bg.jpg) repeat-x;
font: 10pt Zawgyi-one, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;
အဲဒါက အခု forum မှာ သုံးထားတဲ့ CSS ပုံစံပါ..
background: Color လာပါတယ်.. ပြီးရင် url(ပတ်လမ်းကြောင်း) ဘယ်လိုပေါ်မလဲဆိုပြီးလာပါတယ်..
June 2007 edited June 2007 Registered Users
ရဘူးဗျ။ size ညှိရမယ်ဆိုရင် optimum size ကိုပြောပြလို့ရမလားဗျာ။ ခုက ပင်လယ်နဲ့တောင်တွေပါတဲ့ပုံဆိုရင် တောင်ပေါ ်ကအပင်တွေပဲ background မှာမြင်ရတာမျိုးဖြစ်နေလို့ပါ။
Php code ကို html code နေရာမှာ copy, paste ပြီး image ရှိတဲ. url ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဘာဖြစ်လို့မရတာလဲဆို ဖြစ်နိုင်ချေကို ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်..
ပုံရဲ့ မူရင်း size က 1024 X 768 ဆိုပါတော့... ဒါပေမယ့် Broswer မှာ မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းက 800 X 600 မပြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ ပုံက သေသေချာချာမြင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူး...
ဘယ်လိုမျိုးပေါ်ချင်လဲ... ပုံsize က ဘယ်လောက်လဲ... အနည်းဆုံး 1024 X 768 resolution နဲ့စဉ်းစားသင့်ပါတယ်.... မရဘူးဆိုရင် ဘယ်လိုမရတာလဲဆိုတာလေးနဲ့... မရတဲ့ပုံကို print screen ဖမ်းပြီးတော့ တင်ပြပေးဆိုလိုပါတယ်..:101:
ဗျတွေကော ရှင့်တွေကော စုံသွားတာပဲနော်..အထီးလား..အမလား..အဲလေ...ယောက်ျားလေးလား..မိန်းကလေးလားငင်....:d
အမှန်အကန် ပြောတဲ့နေရာမှာ လျှောက်နောက်ထားလို့ အက်တမင်ကတော့ တင်းနေတော့မှာပဲ..ဟီဟိ....:d
October 2007 edited October 2007 Registered Users
ဂျုးဂျူးရဲ့ BAckground ပုံရဲ အလျား(width) ကို 1024 pixel , 800 pixel, 640 pixel စသည်ဖြင့် တမျိုးစီစမ်းပီး လုပ်ကြည့်ပါလား .. တ ခု ခု နဲပ အဆငိပြေမှာပါ. အဲဒီ background ပုံရဲ့ width ကိုပြောင်းချင်ရင်တော့ Photoshop ကိုသုံးရပါမယ်.
၁။ ပုံကိုPhotoshop နဲ့ဖွင်လို်က်ပါ။
၂။ Photoshop menu bar က Image > Image Size ကိုရွေး လိုက်ပါ
၃။ width ရဲ့တန်ဘိုးကို 800, 640 စသည်ဖြင့် လိုသလောက် ထည့်. နောက်က Unit က pixel အဖြစ် သေချာအောင်လုပ်. ပီးရင် OK ကိုနှိပ် Save လုပ် :67:
April 2009 edited April 2009 Registered Users
အားလုံး မင်္ဂလာပါ... ကျွန်တော်လဲ Dreamweaver ကို လေ့လာနေဆဲသူ တစ်ယောက်ပါ....
ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ lesson videos လေးတွေ ဖြန် ့ေ၀သွားပါ့မယ် ခနတော့စောင့်ပါနော်....:D
ဒီမှာ စပြီးတင်ပေးလိုက်ပီနော် တစ်ဆင့်ခြင်းပေါ့... အောက်မှာ ဒေါင်းလိုက်နော်...